Kufananidza Pakati PeMagetsi Wiricheya uye Akajairika Mawiricheya
Kana iwe ukazoerekana waerekana waitika remara nekuda kwenjodzi inosiririsa, kurwara, chirwere kana nekuda kwechimwe chikonzero iwe ungatofanira kupedzisira waguma kushandisa a wiricheya nokuti kufamba. Asi, kusarudza kurudyi wiricheya nekuti mamiriro avo anogona kutotyisa pakutanga. Kukubatsira iwe kuchinjira muhupenyu hwako hutsva mu wiricheya, pane zvinhu zvishoma zvauchazofanira kufunga usati watenga yako wiricheya.
Kune maviri akakosha marudzi e mavhiripu, zvakajairwa izvo zvinogona kufambiswa newe kana nemumwe munhu kusundira uye kupihwa simba mavhiripu, iyo ine mota yekupa kufamba. Tichatarisisa zvino mhando mbiri idzi mavhiripu uye ndinovimba kuti chinyorwa ichi chinoita kuti kuita kwako sarudzo kuve nyore.
Standard mavhiripu dzimwe nguva anonzi manyore mavhiripu. Iwe unovaona muzvipatara, makiriniki ekurapa kwemuviri uye pamwe ndivo vanonyanya kufarirwa mavhiripu pamusika. Iyo wheelchair yakajairwa ane maviri kufamba sarudzo, inogona kuzvifambisa yega kana mumwe munhu achisunda kubva kumashure anogona kuifambisa.
Imwe kubatsirwa kweizvi mavhiripu ndeyekuti iwo anodhura kwazvo asi kune vamwe remara vanhu haisiyo yakasarudzika sarudzo nekuti inofanirwa kudzorwa nemawoko uye pane zvakawanda zvekuedza zvinoda kufamba uye kuzvimisa.
Izvo hazvina kukodzera kune vanhu vane hurema hunokanganisa maoko avo sevaya vane chirwere chisingaperi chearthritis. Kune avo vanogona kunge vane chinguva kuipa kuruoko negumbo, izvi wiricheya inenge isiri sarudzo yakanaka.
simba mavhiripu zviri nyore kushandisa kana zvichienzaniswa neyakajairwa mavhiripu. Simba wiricheya ine mota ine bhatiri-inopa, iyo inopa iyo kufamba uye inodzorwa ne joystick mune ruoko rwasara rwe wiricheya. Iyo yekugadzika padding inowanzo kuve iri nani mumacheya aya, izvo zvinoita kuti uve wakasununguka zvakanyanya kukwira kumushandisi. Vazhinji vanouya netsoka uye musoro zororo.
Macheya emagetsi anogona kushandiswa panze kana mukati. Izvo zvinodhura kupfuura zvakajairwa mavhiripu asi iyo nyaradzo yekuwedzera yainopa yakakosha.
Iwe uchazoda kutarisa kuti uone kuti ingani yemari iyo yako inishuwarenzi ichavhara. Izvi zvinogona kudzikisa zvakanyanya mutengo wekupedzisira waunobhadhara kune chero chigaro.
Manual WiricheyaWiricheya yakamiraProduct InquiryReplacement Parts